२०७९ वैशाख ३० गते एकैदिन ७ सय ५३ स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनका क्रममा थुप्रै मतदानकेन्द्र तनावपूर्ण हुन पुगे । केही स्थानमा झडप, मतदान स्थगित, हवाई फायरसम्म गर्नु पर्‍यो । बाहिरी घेरामा नेपाली सेनालाई राखेर एकाध मतदान केन्द्रको चुनाव सञ्चालन गर्नु पर्‍यो ।
२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दबदबा थियो । सेनाको हेलिकप्टर चढेर उनले एक दिनमा ४/५ वटासम्म सभालाई सम्बोधन गर्न भ्याएका थिए । ‘केन्द्रमा कांग्रेसको बहुमतको सरकार छ ।
यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न पदका लागि डेढ लाखभन्दा बढीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि चार गुणाभन्दा बढी उम्मेदवारी परेको छ । चुनावप्रति यो तहको आकर्षण किन र केका लागि ? के यो चुनाव जितेर स्थानीयको घर-आँगनमा सेवा-सुविधा पुर्‍याउनका लागि भइरहेको हानथाप हो ?
२००४ सालमा श्री ३ महाराज पद्मशम्शेर राणाले ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’ घोषणा गरेका थिए । त्यो नै नेपालको पहिलो संविधान थियो । राणाकालमै जारी यस संविधानले लोकमतलाई अंगीकार गरेको पाइन्छ । उक्त संविधानको धारा–१६ मा स्थानीय तहमा पञ्चायती सभा रहने व्यवस्था थियो । नियमानुसार उमेर पुगेका योग्य नेपाली नागरिकको भोटद्वारा ५–१५ निर्वाचित सदस्यहरुको एक ‘ग्राम पञ्चायत’ रहने व्यवस्था उक्त संविधानमा थियो ।
कुनैपनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न होस् भन्ने निर्वाचन आयोग र सरकारको लक्ष्य हुन्छ । सरकारले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने गर्छ । सँगै सरकारले शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको विश्लेषण गरेर म्यादी प्रहरी पनि भर्ना गर्ने गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि हरेक निर्वाचनमा विभिन्न कारणले हुने हिंसात्मक घटनाका कारण मानिसको ज्यान जाने गरेको छ ।
कस्तो हुनुपर्छ समावेशी सहर ?
पक्कै पनि तपाइँ सहरबासी हुनुहुन्छ । ‘तपाइँ बसिरहनुभएको सहर कस्तो छ ?’ सार्वजनिक यातायातका साधन, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, सरसफाई, उद्यान, खेलमैदान, सडक, सडकपेटी तथा अपांग, बालबालिका र वृद्धवृद्धामैत्री भौतिक संरचना छन् त ?
चुनावको टिकट : पैसावाल भर्सेज इमानदार
२०७९ वैशाख ३० गते देशैभरि एकैचोटी स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । उक्त दिन ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचनमा वडा, गाउँ/नगरपालिका गरी ७ हजार ४ सय ९६ (वडा, गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगर) पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् ।
एक 'पब्लिक इन्टेलेक्चुअल' को अवसान
परराष्ट्र, रक्षा र रणनीतिक मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने र त्यसको मिहीन विश्लेषण गरी नागरिक तहसम्म बुझाउने क्षमता राख्ने सीमित बौद्धिकहरु मध्येका एक व्यक्ति थिए- प्राध्यापक ध्रुवकुमार । अन्तर्राष्ट्रिय र रणनीतिक मामिलाका विषयमा छिनछिनमा विकास भइरहने घटनाक्रमलाई नियाल्ने प्रध्यापक ध्रुवकुमार एक महिना अघिसम्म चिनियाँ पत्रकार चाउ सेङपिङद्वारा लिखित किताब चिनियाँ पत्रकारको नजरमा नेपाल (सुधार वा समाप्त होऊ) खोजेर पढ्दै थिए । यहीबीचमा उनी बिरामी परे । रोगले च्याप्दै गएपछि ७३ वर्षको उमेरमा उनी बुधबार राति संसारबाट बिदा भएका छन् ।
७ सय ५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा २०७९ वैशाख ३० मा निर्वाचन हुँदैछ । प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेशनको राजनीतिक सरगर्मी सेलाउन नपाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाले फेरि राजनीतिक वातावरणलाई तताएको छ ।